Lakkoofsi baqattoota Afriikaa daangaa US'tti qabaman dabale - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Namoonni dhimmaan lakkaa'aman eegdoota daangaatiin Del Rio, Teksaasiitti qambamaniiru.
Gareewwan eegdoota daangaa Teeksaas torbaan lamaan darban keessaa namoota biyyoota afrikaa irraa godaanan dhibbaan lakkaa'aman to'ataniiru.
Eegdooti Galiiwwanii fi Daangaa (CBP) akka jedhutti ''daballiin garmalee' baqattoota biyyoota afrikaa naannoo kana gahaa jiranu ''rakkina namoomaatii.''
Erga baatiii Caamsaa 30 asi lammiilee biyyoota afriikaa 500 oliitu torban lama keessatti kutaa eegumsa daangaa Del Rio qaqqabe.
Baayyeen namoota kanneenis maatii biyyoota akka Angoolaa, Kameruun fi DR Koongoo irraa dhufan ta'u CBP ni hima.
Caamsaa 30 garee guddaan namoota 116 qabuu afriikaarraa ka'uun daangaa Kaaba biyyattii qaqabaniiru.
Ibsichaan akka kaa'ameeti, ogganaan garee eegdotaa Del Rio, Raul L Ortiz akka jedheetti, garaa garummaan afaaniifi aadaa mataaansaa qaamoolee bufataalee irratti dhimmicha hordofan irratti 'dhiibbaa biraa'' taasiseera.
Baqattoonni irra caalaan isaaniis karaa San Antonio tiin Teeksaasiitti km 240 qaxxaamuruun Del Rio qaqqaban.
Dubbii himaan bulchiinsa magaala San Antonio BBC News tti yoo himan "warra imalaniif jiddugala hojjechaa jirra'' jedhan. Akkasumas dhaabilee tola oltotaa naannichaa waliin ta'unis namootaaf nyaataafi dahannoo dhiyeessaa jiraachu himte.
Attamiin gara US imalan?
Imala isaanitiin sarara kami akka hordofan sirriitti ifa miti.
Haa ta'u malee, gaaffiifi deebii kana dura baqqattoota waliin taasifameen baayyeen isaanii dursa biyya isaanii irraa gara Biraaziliitti imaluu osoo gara Kolombiyaa fi jiduu gala Ameerikaa hingahiin daangaadhuma Meksiikootiin jechuudha. Imalli akanaa kunis ji'oota hedduu fidhata jedhameera.
Akka bakka bu'aa Komishinara CBP Joon Saandersitti, eegansichi walumaa galatti namoota kuma 19 to'annaa jala olchee jira.
''Wayita namoota kuma afur hidhaa keessa qabaachaa turee, baayyeedha jechaa turre'' jechuun midiyaatti hime. ''Yoo namoonni kuma 6 dhidhaa keessa jiraatanii, kuni balaadha jenna. Amma namoota gara kuma 19 hidhaa keessa qabna. Kunis baayyee yaachiisaadha.''
Caamsaa keessa baqattooti takkaa hinargiin 144,278 daangaa kaaba qaqaban, isaan keessa kumi 100 ol dubartootaafi daa'immani.
Erga Fulbaana bara darbeetiin asii, erga eegdoota daangaatiin qabamanii booda daa'imman jaha mana hidhaa US keessatti du'aniiru.